ပျင်းတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့လက္ခဏာကဘာလဲ။ | ကမ္ဘာ့ခွေးများ
ခွေးများကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာများစွာပေးသင့်ပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအိမ်ဂရုစိုက်ရန်ကူညီခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်၎င်းကိုပိုင်ရှင်နှင့်တွဲဖက်ထားခြင်းဖြစ်လျှင်လူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သည့်အပြင် ပို၍ ပင်ပေးသင့်သည်။ ဒီဟာကသူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝကဘယ်လိုလဲ.
ခွေးတစ်ကောင်စီ၏ဘ ၀ တွင်အာဟာရဓာတ်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ ရောဂါများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ကာကွယ်မှုများဖန်တီးပေးခြင်းအပြင် ပြီးတော့ငါဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတွေသာမကမျိုးရိုးလိုက်ရောဂါများဒါမှမဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာရောဂါများလို့လည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘဲသူတို့ဟာသေခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အပြင်နေ့စဉ်စားနေတဲ့အစားအစာတွေကနေအာဟာရတွေပေါ်လည်းမူတည်ပါတယ်။
၎င်းသည်ခွေးများတွင်ရှိသည့်ရောဂါနှင့်နေ့စဉ်စားသုံးသည့်အာဟာရများအပေါ်မူတည်ပြီး၎င်းတို့လိုအပ်သည့်ဆေးဝါးများအပြင်၎င်းရောဂါများကိုပိုမိုခံရပ်နိုင်ရန်ကူညီသည်။ သူတို့၏စွမ်းအင်သည်အမြင့်ဆုံးနှင့်ခွေးများအတွက်အရေးကြီးသည်။ အခြားသူများအကြားကစား, ခုန်ပြေး။ ခုန်နိုင်ပါတယ်.
ခွေးတွေကလေးတွေလိုပဲ အလွယ်တကူပျင်းရခွေးများနှင့်မတူဘဲကလေးများသည်သူတို့၏အသက်အရွယ်ပေါ် မူတည်၍ ပျင်းရိသည်ဟုဆိုကြသည်၊ ခွေးများကိုစိတ်ပျံ့လွင့်စေပြီးပျော်ရွှင်သော၊ ပျော်ရွှင်စေနိုင်သည့်နည်းလမ်းမှာပန်းခြံ၊ စတုရန်း၊ အိမ်နီးချင်းသို့မဟုတ်အိမ်သို့လမ်းလျှောက်ရန်ဖြစ်သည် သငျသညျကိုသွားမယ့်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အဖြစ်, သင်သည်အိမ်မှာသူတို့နှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်အဖြစ်။
သင်လုပ်သမျှ၊ လုပ်သမျှကိုရပ်တန့်လိုက်ခြင်း၊ သင့်ခွေး၌ရှိသည့်အစားအစာများ၊ သူတို့သည်သင်၏စိတ်ဓာတ်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်ခွေးတွေစိတ်ပျက်အားလျော့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လို့သင်ဟာအရာရာတိုင်းကိုမှန်အောင်လုပ်ပြီးသင့်ခွေးဟာဝမ်းနည်းနေဆဲ (သို့) စိတ်ဓာတ်ကျနေရင်သင့်ခွေးကပျင်းနေပြီဆိုတာကိုရှာဖွေနိုင်ပြီး၎င်းနဲ့ပါတ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ပျင်းသည်
ခွေးတွေနဲ့အတူနေတဲ့လူတွေရှိတယ်၊ သူတို့ဟာတစ်နေကုန်၊ နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်၊ လေ့လာနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် သူတို့မှာပျော်စရာအချိန်တောင်မရှိဘူး ဒါမှမဟုတ်သူတို့အိမ်ကိုစောစောပြန်မလာကြဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ခွေးတွေနဲ့အချိန်သိပ်မပေးရဘူး၊ ဒါပေမယ့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာမင်းရဲ့ခွေးနဲ့သင်အချိန်ပိုဖြုန်းဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လို့မင်းရဲ့ခွေးကမင်းဟာ မင်းအလုပ်များနေတဲ့သူတစ်ယောက်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီရက်တွေကသူတို့ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာသူတို့ကိုဆုချလိမ့်မယ်။
သို့သော်၊ ၎င်းသည်သင်၏ခွေးသည်တစ်ပတ်အတွင်းပျော်ရွှင်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ သူတို့တစ်နေ့တာလှုပ်ရှားမှုတချို့လုပ်ဖို့လိုတယ် သူတို့ကိုအာရုံထွေပြားစေတယ်။
ခွေးကစားစရာတွေကကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကစားစရာကသူတို့ကိုဆွဲဆောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပုံသဏ္changesာန်ပြောင်းတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုစိတ်ပျံ့လွင့်စေပြီးပိုလို့တောင်ဖြစ်စေတယ်။ ခွေးတစ်ကောင်သည်အရုပ်ဟောင်းနှင့်အတူပျင်းလာနိုင်သည် ကစားစရာတွေထဲမှာပျော့ပျောင်းတဲ့ရော်ဘာဘောလုံးပါ ၀ င်နိုင်ပြီးသင့်ခွေးကဝါးနိုင်ပြီးမင်းကစားနိုင်မှာပါ။ အဲဒါကိုသင်ဖမ်းမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သင့်ခွေးမှာကိုက်ဖို့နောက်သီးခြားကစားစရာတစ်ခုရှိရမယ်။ ဝါး
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » သိချင်စိတ် » ပျင်းတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့လက္ခဏာကဘာလဲ။